စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ တစ်ယောက်တည်းကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခရီးသွားတစ်ဦးသိရှိနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှအချိန်ကိုလုပျတစျခုခုကိုဟုတ်မဟုတ်, သင့်ရဲ့မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့တစ်သက်တာခရီးစဉ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ကြိမ်, ခရီးသွားသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်သည်. ယနေ့ခေတ်လူအများစုရွေးချယ်ကြသည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ Save A Train သည်သင့်ကိုယူဆောင်လာသည်5အများဆုံးအချိုကိုဝှကျထားကျောက်မျက်လ်ဂျီယံအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်! ဖို့ပိုရှိဘယ်လ်ဂျီယံထက်ဘီယာ. ဇာတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ, လြှို့ဝှကျခပန်းပု, နှင့်မြို့ကမဟုတ်ကြသော်လည်းသင်တို့၏ရေဒါတွင်ဒါပေမယ့်လုံးဝသင့်! Belgium has no…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဥရောပတိုက်အပြည့်အဝတကြွယ်ဝသောသမိုင်း, ထူးခြားတဲ့ပုံပြင်များ, Adventures, တခါတရံနက်နဲသောအရာတခုကို. တိုက်ကြီးတိုင်းရှိရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံ mystifying တည်နေရာ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာထင်ရသောဥရောပတိုက်ရှိအချို့၏အများဆုံးအံ့သြဖွယ်နှင့်ထူးဆန်းသောနေရာများကိုကမ္ဘာ့. နက်နဲသောအရာအမြဲရှိပါတယ်…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ သင်ရုံနယ်သာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရထားပေါ်တွင်ခုန်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်ဆိုပါက, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဘာအံ့သြနေကြတယ် 10 နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အများဆုံးအထူးဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြသည်. အများကြီးရှိတာကိုသိရလို့သင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မယ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘာလင်မှကိုယ်တိုင်သွားရောက်လည်ပတ်ရန်စိတ်ကူးကောင်းသည့်နေရာဖြစ်သော်လည်းဘာလင်မှအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားသောနေ့ခရီးစဉ်များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်! သငျသညျနေ့ရက်ကာလအဘို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားရန်ဂျာမနီမြို့တော်အလုံအလောက်ကြီးမြတ်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဘာလင်မှအိမ်နီးချင်းမြို့များနှင့်ကျေးလက်လုပ်ကွက်များသို့တစ်ရက်ခရီးစဉ်…